[ToMo] Những Bộ Phim Hoạt Hình Hay Nhất Cho Người Lớn! | Anybook.vn - Anybook
[ToMo] Những Bộ Phim Hoạt Hình Hay Nhất Cho Người Lớn! | Anybook.vn
Efa am-polony taona maro aho no mpankafy sarimihetsika an-tsary ho an’ny ankizy, anisan’izany ny sarimihetsika Pixar maro. mitambatra vokatry ny masovazivazy sy toetra mahatsikaiky (fa indraindray lalina). foana toa ‘olombelona’ kokoa noho ny olona maro fantatro no nahatonga ahy ho olona fITIAVANA Tiako ny mijery sarimihetsika ho an’ny ankizy.
Na dia efa ho 40 taona aza, Sherk no sarimihetsika tiako indrindra. Eny, nandatsa-dranomaso vitsivitsy aho ho an’ny blockbuster olon-dehibe toa ny Titanic (1997) ary izany variana amin’ny zavakanto frantsay tsy manam-paharoa amin’ny fanaovana sarimihetsika Amelie (2001), fa ny sariitatra ho an’ny ankizy dia toa tsy antitra na lany daty. Bebe kokoaOMS indray tsy tia fiafarana mahafinaritra ary laharana feonkira majika izay isaky ny maneno mahatonga anao ho be fanantenana?
Satria tsy afaka manome ahy velively ny zava-misy Afaka manidina aho na manambady millionaire romantique ary marefoNataoko mandany vitsivitsy kamo hariva ary SAMBATRA ankafizo ireto sarimihetsika ireto, mba hampiala voly ny tenako rehefa leo sy tsy manana sipa azo ianteherana. Ny mahagaga dia mbola tsy nahita bandy aho manaiky mipetraha ary mijery avy amin’ny andiany iray sariitatra miaraka ahofa amin’ny tenin’ny sarimihetsika Tantara tsy misy dikany malaza, “izay indray dia tantara hafa…”
Ny sarimihetsika ho an’ny ankizy izay tian’ny olon-dehibe dia fialamboly mahafinaritra foana. RAHA TSARA misafidy eo ny andian-dahatsoratra miady amin’ny TV Kandidà ara-politika, fandaharana amin’ny alina na sarimihetsika fanadihadiana heloka bevava raha tsy misy mahalala ny meloka tsy misy fitaovana forensika avy amin’ny ho avy, naka sarimihetsika ho an’ny ankizy fotsiny aho mba hialana sasatra. Malemy fanahy izy ireo. izy ireo manampy mitaiza fanahinao manontolo. Tena tsara ho an’ny Dihy zoma alina na fihaonana an-trano, azoko antoka izany. Makà kitapo lehibe misy popcorn sy ondana aina ary stable seza hankafizana ireo sarimihetsika mahafinaritra ireo.
Raha te hijery sarimihetsika manome anao izany fahatsapana ambony izany ianao nefa tsy mampiasa zava-mahadomelina, aza adino ity iray ity!
Ao anatin’ny 10 minitra voalohany, dia ho toy ny hoe: “Inona ity korontana ity?” Mahareta anefa. aoriana ry zalahy Lego villains fiovan-tarehy ao amin’ny lava-bato misy tontolo Lego mahafinaritra, izay an’arivony Ankehitriny dia vita ny asa amin’ny fananganana asa sary Lego tsara tarehy izay hampientanentana anao.
Hapetraka amin’ny tany Lego mahafinaritra toa ny Old West sy Cloud Cuckoo Land ianao. Toa i Batman no tena mahasosotra indrindra, fa ny fisehoan’i Chewbacca tsy nampoizina dia hampihomehezana anao. Tena tiako ilay pirate niova avy amin’ny zavatra Ny sisa sy ny Princess Uni Kitty dia toetra tena mahafatifaty, na dia kely aza olona maromaro (mitenena moramora).
Tiako loatra ity sarimihetsika ity ary hatrany mijanòna mba hahita izany rehetra izany crédit mandra-pahavitan’ny sarimihetsika tapitra. Ary raha afaka miala amin’ny “Everything is Awesome” ao anatin’ny andro vitsivitsy monja ianao dia maneho hevitra ary ampahafantaro ahy ny nataonao.
Didim-pitsarana: Mijere rehefa tsy fantatrao izay hojerena, rehefa te hanao fety nefa tsy afaka mivoaka, ary rehefa leo mijery sarimihetsika hafa.
Raha mbola tsy nahita an’i Rio ianao dia aza miandry ela fa miomàna hahatsapa izany mitabataba ao amin’ny boîte de nuit toy ny hoe vao 20 taona monja ianao. Romance, tantara an-tsehatra, mozika mahafinaritra, fomba fijery manaitra ary VITSY olon-dratsy nivory tao anaty sarimihetsika iray.
Mihodinkodina amin’ny macaw (Blu) ny teti-dratsin’i Rio, izay tratran’ny zava-niainana tsy nahy tao Rio de Janeiro. Tsy matoky tena i Blu, manahy foana ny amin’izay hitranga,… Toy ny dia lavitra ny fahamaotiana na fitadiavana vahaolana amin’ny krizy eo amin’ny fiainana andavanandro ilay sarimihetsika, SAINGY misy dikany kokoa raha oharina amin’ny maro sarimihetsika momba ny lohahevitra.
Mazava ho azy, Blu dia hahita a Ramatoa boloky izay tiany hanenjika (Jewel) ary ny tetika dia trandrahana amin’ny fomba mahazatra izay hiezaka handresy lahatra azy fa izy no vorona tsara indrindra, ary ny olon-dratsy dia hahazo ny sazy mety. Nolazaiko ve fa be dia be ny dihy tena tsara any? Ary ny toerana dia hanadino anao beng raiso ny tantara fa tena mampitolagaga tokoa?
Didim-pitsarana: Jereo raha olon-tokana te hahatsapa ho “ara-dalàna” ianao (na inona na inona dikan’izany). Na koa reraka sy marary ka tsy afaka mivoaka isaky ny zoma na sabotsy alina. Raha ny tena marina, ity dia trano fandraisam-bahiny tena tsy ho hitan’ny olona any ivelany rehefa mijery azy ianao!
SHREK 1, 2, 3, 4 ARY mandra-VITA
Fantatro, Mazava ho azy fa tsy maintsy manoratra momba an’io aho satria io no sarimihetsika tiako indrindra. aho foana
fitiavana manokana ho an’ny zavatra medieval sy ao Shrek dia noforonina tanteraka ny tontolo taloha, miaraka amin’ny toe-javatra rehetra ny fahasosorana dia miorim-paka mba hahazoana fiaraha-miory amin’ny olon-dehibe.
Tsara ny zava-drehetra: ireto toetra! sehatra! IRETO natopiny fitiavana! Puss in Boots dia toetra tena sexy ary ianao tsy azo atao ny tsy malahelo toetra Mahantra Gingerbread Man (Gingy).
Ny Princess Fiona dia dikan-teny mahery mahavariana ny vehivavy no iharan’ny tsindry ara-tsosialy, olona sady mahay mikarakara lakozia no mahay manipy daka amin’ireo olon-dratsy, sady mamadika voronkely ho antontam-bolo.
NAMANA afaka maniry izany Somary mahonon-tena kokoa i Shrek, saingy izy koa fotsiny dia olona Filistinina amin’ny fo mafana afeno ny ambanin’ny fotaka. Tsara ny sarimihetsika Shrek satria miatrika olana maro mahazatra eo amin’ny fiainana any amin’ny tany angano.
Didim-pitsarana: Jereo izany mba hahazo bebe kokoa momba ny tena lehilahy na tena vehivavy. Na jereo raha tianao ny aventure na ny medieval.
MONSTERS, INC. & MOSTERS UNIVERSITY
Ny tolona nataon’i Mike sy Sulley mba hifanaraka amin’ny toerana nalehany dia tsy inona fa dika mitovy amin’ny fiainako, fa satria toa mianatra zava-dehibe foana izy ireo ARY mahavita hahomby amin’ny faran’ny andiany tsirairay. fahafahana hahatsapa fanantenana.
READ 45 Hình Ảnh Đẹp Em Nhớ Anh Rất Nhiều & Nỗi Nhớ Da Giết Không Nguôi | Anybook.vn
Ho tianao ireo sarimihetsika Monsters ireo satria raha tsy miombom-pihetseham-po amin’ireo mpilalao ianao dia hahafantatra olona vitsivitsy izay nanana olana mitovy amin’izany tamin’ny sarimihetsika.
Raha tsy misy zavatra hafa, i Henry J. Waternoose III dia hampahatsiahy anao ny lehibeny maharikoriko na ilay Librarian goavambe mety hitovy amin’ilay tovolahy antitra henjana nihaona taminao. Ity dia sarimihetsika mampiala voly, miaraka amin’ireo zavaboary vahiny tena manan-tsaina toa ny olombelona ao amin’ny tontolo feno biby goavam-be.
Didim-pitsarana: Jereo izy ireo rehefa toa nanjavona ny fanantenana rehetra. Na raha mila fiaraha-miory amin’ny zanakao ianao. Na rehefa te haka aina fotsiny ianao dia avelao olon-kafa hanao ny fisainana ho anao.
Mitady fitsangatsanganana an-tseza mankany amin’ny lava-bato taloha? Raha izany no izy dia ity no sarimihetsika ho anao! Tsy vitan’ny hoe hahita dobo majika feno karazan-javamaniry masiaka manenjika ireo biby eo an-toerana ianao, fa ho hitanao koa ny fiovan’ny takelaka tektonika goavambe, arahin’ny tsy fandriam-pahalemana sy ny faharavan’ny tany.
Tiako ity sarimihetsika ity satria tena mampihomehy ireo mpilalao (amin’ny fomba tena bibidia sy misavoritaka) ary tena mahavita mampita lesona mahazatra ho an’ny ankizy amin’ny fomba mahatsikaiky sy mampiala voly izy ireo.
Ny toetran’i Gran dia manome fijery ny ankizy amin’ny vanim-potoana talohan’ny tantara izay zara raha takany amin’ny fiainana andavanandro. Ny toerana mampientam-pon’ny DreamWork dia hampiala voly anao raha mandresy ny fanamby rehetra hitsangana avy ao amin’ny lavaka mangitsokitsoka ny mpilalao ary farany dia fiafarana mahafaly izay nandrasan’ny rehetra.
Didim-pitsarana: Fitsidihana seza tsara tarehy. Fihetseham-po kely samihafa. Jereo raha ketraka be ianao ary mitady fientanentanana.
TANTARA KIlalao 1, 2, 3 SY TANTARA KIlalaon’ny fampihorohoroana
Mampihomehy ny tarehin’ny Toy Story, manomboka amin’i Mr Potato Head (izay very anjara hatrany) ka hatramin’ny dinôzôra fetsifetsy Rex sy Buzz Lightyear, mpanamory sambon-danitra mampino izay tsy mahalala hoe iza izy. Kilalao aho.
Sarimihetsika mahafinaritra ho an’ny ankizy ny Toy Story 1 satria mino tokoa ny tanora fa mety ho velona ny kilalao raha tsy eo ny olombelona. Mahaliana ihany koa anefa ny olon-dehibe satria betsaka ny toe-javatra mampahatsiahy anao ny tantara ara-politika na ara-tsosialy momba ny olona amin’ny ankapobeny. Misy fotoana mahatsikaiky azon’ny rehetra ifandraisan’ny rehetra – Adala be ny Barbie ary hafahafa ny famoronana kilalao hafahafa nataon’i Sid mpifanila trano aminy.
Mety efa mahazatra anao ny teny mampihomehy maro avy amin’ny Toy Story, toy ny “To infinity and beyond!” (Buzz Lightyear), “Ahoana ny fomba fanoratra FBI?” (Rex), “Jereo, Picasso aho!” (Mr Potato Head) ary “Miezaha toy ny rivotra, Bullseye!” (Woody). Misy ihany koa ny fizarana Halloween kely 30 minitra antsoina hoe Toy Story of Terror izay mendrika hojerena ihany koa.
Didim-pitsarana: Jereo miaraka amin’ny ankizy mba hahazoana antoka fa mankafy tanteraka ilay sarimihetsika ianao. Na mijery azy ho sarimihetsika mandritra ny zoma na asabotsy alina rehefa mila zavatra tsy hay hadinoina ianao.
READ SCP là gì? Những điều cơ bản ta cần biết về mô hình SCP | Anybook.vn
FIARA 1 & 2
Mitady zavatra mahafinaritra ianao rehefa leo ny alahady tolakandro? Ny fiara 1 sy ny fiara 2 miaraka amin’ireo mpanamory fiara manontolo dia hitondra traikefa vaovao.
Betsaka ny kojakoja fiara mahafinaritra, fanohanana ary dokambarotra, ary tsy mila miditra anaty fiara ianao raha te hankafy ny fomba nampianaran’i Mater an’i Lightning McQueen hitondra traktera eny an-tsaha amin’ny misasak’alina.
Fanampin’izay, ny endri-tsoratra sy ny toerana misy an’i Radoder Springs dia aingam-panahy avy amin’ny tena olona sy toerana ao amin’ny Route 66, miaraka amin’ny fikasihana vitsivitsy. Cars 1 no sarimihetsika tsy miankina farany nataon’i Pixar talohan’ny nahazoan’i Walt Disney azy.
Cars 2 dia mpitsikilo mampientam-po miaraka amin’ny glitz be dia be – amin’ny fomba James Bond. Tany Japon sy Eoropa, i Mater dia lasa mpiara-miasa amin’i McQueen indray ary maro ireo mpilalao fiara vaovao no hivory indray amin’ity dia ity. Hafa tanteraka!
Didim-pitsarana: Jereo izany rehefa leo ianao na rehefa mila sarimihetsika hampiala voly ny fianakavianao ao an-trano. Safidy tsara hamenoana ny alahady tolakandro lava.
Ny Finding Nemo no sarimihetsika ankafizin’ny ankizy rehetra, saingy tian’ny olon-dehibe ihany koa izy io noho ny toerana misy ny ranomasina mahafinaritra sy ireo toetra mahaliana izay mitambatra eny an-dalana.
Tsotra ny tetika – Nemo, ilay clownfish kely nangalarina tao anaty ranomasina ary napetraka tao amin’ny biraon’ny mpitsabo nify dia tsy maintsy mahita ny lalana hody any amin’ny harambato. Ny rain’i Nemo adala, Marlin, dia nanatevin-daharana an’i Dory, izay very fitadidiana fohy, nitady an’i Nemo, niaraka tamin’ny traikefa be dia be teny an-dalana.
Hahafinaritra anao ny fomba fijery ranomasina mahagaga, seho biraon’ny mpitsabo nify, fihaonana amin’ny Sharks Anonymous, fitaingenan’ny sokatra, biby goavam-be any an-dranomasina ary maro hafa. Mahavariana ny sary, toy ny mahazatra avy amin’i Pixar, miaraka amin’ny vazivazy maro izay hahasarika ny olon-dehibe sy ny ankizy.
Didim-pitsarana: Mijere miaraka amin’ny ankizy kely na rehefa te hanjavona any amin’ny toerana hafa mandritra ny ora vitsivitsy. Na raha tsy te hanatona mpitsabo nify ianao.
Mpanoratra: Suzanne Day
Rohy mankany amin’ny lahatsoratra voalohany: Sarimihetsika Ankizy Sarimihetsika tsara indrindra – Ho an’ny olon-dehibe!
Mpandika: Hue Huong – ToMo: Mianara zava-baovao
Ny zon’ny mpamorona ny dikanteny dia an’ny ToMo. Rehefa mizara dia ilaina ny mitanisa ny loharano feno miaraka amin’ny anaran’ny mpanoratra sy ny loharano ” Mpandika: Hue Huong – Loharano:ToMo: Mianara zava-baovao“
. Ny lahatsoratra misy loharano tsy feno, ohatra hoe “Araka ny ToMo” na hafa dia tsy ekena ary tsy maintsy esorina. (**) Araho ny Facebook ToMo: Mianara zava-baovao
mamaky dikanteny amin’ny fiteny roa sy manavao vaovao mahasoa isan’andro! (***) Lasa mpiara-miasa tapa-potoana, Intern hampihatra ny teny vahiny ary hanome fahalalana ho an’ny fiaraha-monina amin’ny:http://bit.ly/ToMo-hiring
Previous: [Cập nhật] Tải xuống mẫu báo cáo khảo sát thị trường mới nhất | Anybook.vn
Next: 15 quyển sách hay nhất thế giới nên đọc một lần trong đời | Anybook.vn